Halbeegyada Jarmalka ee cabbiraadda iyo halbeegyada miisaanka Jarmalka
Waxaan ubaahanahay unugyo cabir iyo culeys daqiiqad kasta oo nolosheena ah. Ogaanshaha waxa ay unugyadan ku yihiin afkeenna iyo waxay qabtaan waxay naga caawin doontaa inaan baranno u dhigma Jarmal. Casharkaan wuxuu la socdaa mowduuca aan kusoo qaadan doono Cutubyada Jarmalka ee Qiyaasaha iyo Miisaanka dhamaadka casharka waxaad baran doontaa sida loo adeegsado cutubyadan markaad kuhadlayso ama aad wax kuqoreyso Jarmal.
Halbeegyada Jarmalka ee Miisaanka iyo Miisaanka
Cutubyada Jarmalka ee Qiyaasaha iyo Miisaanka Maaddaama aan u maleyneyno inay soo jiidan doonto dareenkaaga inta miiska la baarayo, waxaan jeclaan lahayn inaan tilmaanno in Jarmalka iyo Turkiga inta badan qeybaha ay iskaga mid yihiin xagga higgaadinta iyo ku dhawaaqidda labadaba. Faahfaahintani guud ahaan waxay ku habboon tahay unugyada cabbiraadda culeyska, laakiin waa in la xusuusnaado inay jiraan waxyaabo ka reeban. Maaddaama afkeenna iyo luqado kale oo badani ay ereyo ka qaadan karaan midba midka kale, isku ekaanshahaas waa iska dabiici. Waxaan u maleyneynaa inay fududaan doonto in maskaxda lagu hayo maxaa yeelay way isku mid yihiin.
Cutubyada Jarmalka ee Qiyaasaha iyo Miisaanka Waxaan sameyn doonnaa miis annaga oo tixgelinayna unugyada cabbiraadda iyo culeyska oo ah cinwaano kala duwan si aad si fudud aad ugu fududaan karto muujinta maskaxda inta aad ka shaqeyneyso mawduuca.
Qaybaha Jarmalka ee Cabirka tilmaamaya Dhererka iyo Fogaanta
1 mitir → 1 Mitir (m)
1 Sintimitir → 1 Sentimeter (cm)
1 milimitir → 1 Millimitir (mm)
1 desimitir → 1 desimitir (dm)
Xadka 1 → 1 kiilomitir (km)
1 mitir laba jibbaaran → 1 Quadratometer
1 kiiloomitir oo laba jibbaaran → 1 Quadrat kilomitir
1 Cagta → 1 Fiisooyinka
1 inji → 1 xayawaan
Halbeegyada Jarmalka ee Cabirka tilmaamaya Miisaanka iyo Saamiga
1 kiilogaraam → 1 kiilogramm (kg)
1/2 Kilo / Kilo badh → 1 Pfund (lb)
1 Gram → 1 garaam
50 kiilogaraam → 1 Zentner (ztr.)
1 Liter → 1 Litir (L)
1 Millilitir → 1 Millilitir (ml)
1 Gallon (4,5 Liter) → 1 Gallon (gal)
1 mitir Cubic → 1 Qiyaas mitir (m3)
1 Cadad → 1 gabal
1 Gabal / Cadad → 1 gabal
1 xirmo → 1 Xirmo
1 sanduuq → 1 Qiyaaso
1 Shaqada → 1 Shaqada
1 qayb → 1 Saamiga
1 Koob → 1 becher
1 koob koob → 1 galaas
1 Lammaane → 1 lammaane
1 Dersin → 1 Dutzen
Waad ku mahadsan tahay xiisaha aad u leedahay bartayada, waxaan kuu rajeyneynaa inaad ku guuleysato casharradaada Jarmalka.
Si la mid ah, waxaad ku qori kartaa wixii su'aalo kale ah, ra'yi, soo-jeedin iyo dhaleeceyn ah nooc walba ah oo ku saabsan habka aan wax u barano Jarmalka, casharradeena Jarmalka iyo degelkeenna.
# Halbeegyada Jarmalka ee Miisaanka iyo Miisaanka
# Qaybaha Jarmalka ee Cabirka tilmaamaya Dhererka iyo Fogaanta
# Halbeegyada Jarmalka ee Cabirka tilmaamaya Miisaanka iyo Saamiga